Ezubere ọzụzụ a maka ndị niile chọrọ ibi na France, ma ọ bụ ka kwagara ebe ahụ, ma chọọ ịmụtakwu banyere nhazi na ọrụ nke obodo anyị.
Na Anna na Rayan, ị ga-achọpụta nzọụkwụ mbụ ị ga-eme n'oge echichi gị (otu esi emeghe akaụntụ akụ? Otu esi edebanye aha nwa gị n'ụlọ akwụkwọ?, ...), ọrụ ọha na eze dị iche iche na uru ha bara, na ntụaka bara uru na ibi na France (otu esi aga gburugburu, kedu ihe ị ga-eme iji chọta ọrụ? ...).
Nhazi a n'isi asaa siri ike 3 awa n'usoro nke nkeji ole na ole ị nwere ike ịhụ ma nyochaa n'ụzọ gị onwe gị yana dịka mkpa gị siri dị.
Ọ nwere vidiyo na mmemme mmekọrịta. Site na ajụjụ ndị a na-enye n'oge usoro ọmụmụ ahụ, ị ​​nwere ike nyochaa ihe ọmụma enwetara. A naghị echekwa nsonaazụ gị n'elu ikpo okwu.
Ibi na ịnweta ọrụ na France Ọnwa Iri na Abụọ 18, 2021Tranquillus
GỤỌ Free: Otu esi eji arụ ọrụ na nhazi ọnọdụ
gara agaNlekọta mgbe Covid-XNUMX gasịrị
-esonụOkwu mmalite maka igwe mmiri mmiri